Naxariistii Dhamaan, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Markii dadku isugu soo urureen kaniisadaha ku yaal Ameerika iyo dalal kale maalinta maalinta baroor-diiqda, Sebtember 14, 2001, waxay u yimaadeen inay maqlaan ereyada raaxada, dhiirigalinta, iyo rajada. Si kastaba ha noqotee, tiro ka mid ah hoggaamiyeyaasha kaniisadaha Masiixiyiinta ee muxaafidka ah - ayagoo ka soo horjeedo ujeedadooda ah in ay rajo siiso umadda dhibaataysan - ayaga oo si ula kac ah u faafinaya farriin sii hurinaya rajo xumada, niyad jab, iyo cabsi. Taasi micnaheedu waa in lagu dilo dadka ay ku jeclaadeen weerarka, ehelka ama asxaabta aan weli qirashada Masiixa. Kuwo badan oo aasaasi ah iyo masiixiyiin Masiixiyiin ah ayaa ku qanacsan in qof kasta oo dhinta isagoo aan sheegan Ciise Masiix, haddii sababta oo ah isagu uusan waligiis Masiixu maqlin, wuxuu tegi doonaa jahannamada geerida kadib wuxuuna ku xanuunsanayaa murug aan la sheegi karin - gacanta Ilaah, taas oo isla Masiixiyiintu ay si cajiib ah uga hadlaan inuu yahay Ilaaha jacaylka, nimcada iyo naxariis. "Ilaah wuu ku jecel yahay" qaarkeenna Masiixiyiin ah ayaa u muuqda inay dhahaan, laakiin markaa waxaa ku yaal daabacaadda yar: "Haddaadan tukan salaad aasaasi ah ka hor dhimashada, Eebahay naxariis iyo Badbaadiyahay weligeed way silcin doonaan."
Injiilka Ciise Masiix waa war wanaagsan (Greek euangélion = macmiil faraxsan, farriinta badbaadada), iyadoo xoogga la saarayo "wanaag". Waa waana midka ugu farxadda badan farriimaha oo dhan, gabi ahaanba qof walba. Ma aha oo keliya war wanaagsan oo loogu talagalay kuwa aad u yaqaana Masiixa ka hor dhimashada; Waa war wanaagsan oo uunka oo dhan uunka - dadka oo dhan oo aan laga reebin, xataa kuwa dhintey iyagoo aan weligood maqlin Masiixa.
Ciise Masiix waa bixista dib-u-heshiisiinta oo keliya ma aha dembiyada Masiixiyiinta laakiin waxaa loogu talagalay kuwa dunida oo dhan (1 Yooxanaa 2,2). Abuuraha sidoo kale waa dib u heshiisiinta abuurkiisa (Kolosay 1,15: 20). Haddii dadku bartaan runta ka hor intaanay dhiman kahor kuma xirna waxa uu ka kooban yahay runtiisa. Waxay kuxirantahay oo keliya Ciise Masiix, mana aha ficil aadanaha ama ficil bina aadamka oo dhan.
Ciise wuxuu yidhi: "Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay, sidaa darteed in kuwa isaga rumaystaa oo dhammu ayan lumin, laakiin waxay leeyihiin nolosha weligeed ah" (Yooxanaa 3,16, dhammaan xigashooyinku waxay dib u eegeen tarjumaadii Luther, daabacaadii caadiga ahayd). Waa Ilaah dunida jeclaaday iyo Ilaah wiilkiisii ​​siiyey; oo wuxuu u soo bixiyey inuu soo furto wixii uu jeclaa - adduunka. Ku alla kii rumaysta Wiilka Ilaah soo diray wuxuu geli doonaa nolosha weligeed ah (si ka wanaagsan: «nolosha da'da soo socota»).
Iyada oo aan lahayn erey qoran waxaa halkan lagu qoray in aaminaadani ay tahay inay timaado dhimashada jirka ka hor. Maya: aayadda ayaa oranaysa in rumaystayaasha "aan lumin", iyo maadaama xitaa rumaystayaashu ay dhintaan, waxaa iska cad in "lumay" iyo "dhimasha" aysan ahayn wax la mid ah. Rumaysadku waxay dadka ka horjoogsataa inay lumiyaan, laakiin aan dhimanin. Khasaaraha uu Ciise halkan kaga hadlayo, oo laga tarjumay Gariigga magacaablumi, ayaa tilmaamaya dhimashada ruux ahaaneed, ee maaha mid jidh ahaaneed. Waxay la xiriirtaa baabi'inta, ciribtirka, luminta bilaa raad. Ku alla kii rumaysta Ciise ma heli doono dhammaadka aan laga tirin karin, laakiin wuxuu geli doonaa nolosha (soe) ee da'da soo socota (aion).
Qaar baa wali sii galaya noloshoodii, sidii iyagoo dhulka lugaynaya, nolosha soo socda, iyo nolosha boqortooyooyinka. Laakiin waxay matalaan tiro yar oo ka mid ah "adduunka" (cosmos) in Ilaah aad u jeclaaday ayuu u soo diray wiilkiisii ​​si uu u badbaadiyo. Ka warran inta hartay? Aayaddani ma sheegayso in Eebbe ma badbaadin karo ama ma badbaadin doono kuwa dhinto jidh ahaan iyagoo rumaysta.
Fikradda ah in dhimashada jirku ay horjoogsato Ilaah mar iyo dhammaan suurtagalnimada in la badbaadiyo qof ama laga dhigo qof qof rumaysta Ciise Masiix waa fasiraad aadanaha; Kitaabka Quduuska ah wax sidan ah kuma jiraan. Saas ma aha, waxaa naloo sheegay: in dadku dhinto, oo xukunku yimaado (Cibraaniyada 9,27). Garsooraha, waxaan had iyo jeer rabnaa inaan xasuusano taas, inaan u mahadcelinno Ilaah kale oo aan ahayn Ciise, Wankii gawracayay ee Ilaah, oo u dhintay dembiyada aadanaha. Taasi waxbaa badalaya wax walba.
Abuuraha iyo dib u heshiisiinta
Aaway aragtida ka timid in Ilaah badbaadin karo kuwa nool, ee aan ahayn kuwa dhintay? Ma wuxuu ka adkaaday dhimashada, miyaanay ahayn? Kuwii dhintay ayuu ka soo sara kacay? Ilaah dunida ma nebcaado. wuu jecel yahay. Isaga nin ugama abuurin cadaabta. Masiixu wakhtigaas wuxuu u yimid inuu dunida badbaadiyo, oo uusan xukumin (Yooxanaa 3,17).
Am 16. September, dem Sonntag nach den Anschlägen, sagte ein christlicher Lehrer vor seiner Sonntagsschulklasse: Gott sei im Hass ebenso vollkommen wie in der Liebe, das erkläre, warum es neben dem Himmel auch eine Hölle gebe. Der Dualismus (fikirka ah in wanaagga iyo xumaantu ay yihiin laba xoogag iska soo horjeedda oo adduunka ka jira) waa faasiqnimo. Miyuusan ogayn inuu sidaas oo kale u rogayo Ilaah laba jibaarayo, oo uu ku dhajinayo inuu yahay Ilaah xambaarsan xasaradda nacaybka kaamilka ah - jacayl kaamil ah?
Ilaah runti waa xaq ah oo dambiilayaasha oo dhan waa la xukumay oo la xukumay, laakiin injiilka, injiilka wanaagsan, wuxuu innaga bilaabaa qarsoodiga ah in Ilaah Masiixu aqbalay dembigan iyo xukunkan annaga oo wakiil ka ah! Runtii cadaabta waa dhab oo waa cabsi. Laakiin waxa si sax ah u ahayd cadaabkan xun ee loo qoondeeyay kuwa aan cibaadada lahayn ee Ciise ku silcay adanaha aadanaha (2 Korintos 5,21:27,46; Matayos 3,13; Galatiya).
Dadka oo dhan waxaa lagu ciqaabay dembi (Rooma 6,23), laakiin Ilaah wuxuu ina siiyaa nolosha weligeed ah ee Masiixa (isla aayadda). Sidaa darteed waxaa loo yaqaanaa: nimco. Cutubka ka hor, Bawlos sidan ayuu u dhigayaa: «Laakiin hadiyaddu ma aha sida dembi oo kale. Maxaa yeelay, markii kuwa badanu u dhinteen dembiga mid keliya, 'in badan, taasi waa, qof kasta, qof walbana; Ma jiro qof isagu aan u qaadan dembiga Aadan] Intee in ka badan intee in ka badan ayaa nimcadii Ilaah iyo hadiyadda la siiyey kuwa badan [mar labaad, qof kasta, gabi ahaanba waa qof kasta] nimcadii nin keliya Ciise Masiix » (Rooma 5,15).
Bawlos wuxuu yidhi: “Sida ay ciqaabteenu tahay, wayna adag tahay (Xukunkuna waa cadaabta), sidaa daraadeed waxay ka laabataa nimcada iyo hadiyadda nimcada Masiixa. Si kale haddii loo dhigo, ereyga Ilaah ee dib-u-heshiisiinta ee Masiixu wuxuu aad uga xoog badan yahay eraygiisa xukunkiisii ​​ee Aadan - mid ayaa gebi ahaanba lagu daadiyaa (Inta intey ka badan tahay)). Sidaa darteed Bawlos wuxuu noogu sheegi karaa 2 Korintos 5,19:5,15: Masiixa wuxuu ku [Ilaah] kula heshiisiiyay dunida [qofkasta, "kuwa badan" oo ka yimid Rome] iskiisna iskumuu tirin dembiyadooda iyaga. . »
Ku noqo asxaabta iyo kuwa la jecel yahay kuwa dhintey iyagoon qiraynin caqiidadooda Masiixa: injiilku ma wuxuu siinayaa wax rajo ah, wax dhiirrigelin ahna kama aha aayaha kuwa ay jecel yihiin? Xaqiiqdii, Injiilka Yooxanaa, Ciise wuxuu ku yidhi hadalka afka ah: "Aniguna, markii layga sarrayo dhulka, qof walba ayaan ii soo jiidan doonaa" (Yooxanaa 12,32). Tani waa war wanaagsan, runnimada injiilka. Ciise ma uusan dejin jadwalka, laakiin wuxuu caddeeyay inuu doonayo inuu soo jiito qof walba, ma ahan oo keliya dad yar oo u suurtagashay inay isaga bartaan geeridiisa ka hor, laakiin gabi ahaanba qof walba.
La yaab ma laha in Bawlos u qoray Masiixiyiinta ku nool magaalada Kolossae in Ilaah “ka raalli noqday”, iska ilaali inaad "ku faraxsan tahay" inuu Masiixa ku sasabay wax walbana ha ahaadee, ha ahaato dhulka ama jannada, isaga oo nabadgeliyadiisa samaynaya Dhiigga iskutallaabta » (Kolosay 1,20). Taasi waa war wanaagsan. Iyo, sida Ciise yidhi, waa war wanaagsan oo adduunka oo dhan u muuqda, oo aan ku koobnayn koox kooban oo la soo doortay.
Bawlos wuxuu doonayaa inuu akhristayaashiisa ogeysiiyo in Ciisahan, wiilkan Ilaah laga sara kiciyey kuwii dhintay, uusan ahayn kaliya aasaasi cusub oo xiiso u leh diinta oo leh fikrado diimeed oo cusub. Bawlos wuxuu u sheegayaa in Ciise yahay mid kale oo aan ahayn abuurka iyo wax walba daryeela (Aayadaha 16-17), iyo wixii intaas ka badan: in Ilaah yahay waddo lagu soo celiyo gabi ahaanba wax kasta oo laysku waafajiyo oo ku dhacay taariikhda tan iyo bilowgii taariikhda (Aayadda 20)! Masiixa - ayuu yidhi Bawlos - Ilaah wuxuu qaadanayaa talaabada ugu dambaysa si uu u oofiyo ballanqaadyadii reer binu Israa'iil la galay oo dhan - wuxuu ballanqaaday in maalin uun uu dhaafi doono dembiyada oo dhan ficil naxariis leh, oo dhammaystiran iyo mid caalami ah, oo wax walba oo cusub lagu samayn doono. (eeg Falimaha Rasuullada 13,32: 33-3,20; 21: 43,19-21,5; Ishacyaah 8,19: 21; Muujintii; Rooma).
"Laakiin badbaadada waxaa loogu talagalay Kiristanka oo keliya," qaylinayaan xag-jirnimada. Sure, taasi waa sax. Laakiin waa kuma "Masiixiyiin"? Miyayse ahayn kuwa kaliya oo toobad keena toobad caadi ah iyo salaadda tukashada? Ma waxaa keliya oo lagu baabtiisay baabtiiskii? Miyay iyagu yihiin kuwa iyagu ka tirsan "kaniisadda dhabta ah"? Kaliya kuwa xaq ku helida wadaadka sharciyeysan? Kaliya kuwa joojiya inay dembaabaan? (Miyaad sameysay? Miyaad sameyn.) Kaliya waa kuwa yaqaan Ciise kahor intaysan dhiman? Mise Ciise laftiisu - gacmihiisa ciddii gacan gashay ayaa xukunku xukunka saaray - ugu dambayntiina wuxuu goaansadaa cidda iska leh kuwa uu u naxariisto? Oo markii uu halkaas joogo, wuxuu go'aamiyaa cidda ka adkaatay dhimashada iyo yaa siin kara nolosha weligeed ah cidda uu doonayo, iyadoo aan loo eegeynin goorta uu qof qof rumeysan yahay, ama aan la kulanno qaabilaadda guud ee diinta dhabta ah , go'aankan halkii?
Waqtiga qaar, Masiixi walba wuxuu noqday Masiixi, taas oo ah, inuu rumeeyo Ruuxa Quduuska ah. Mowqifka asal ahaanta, si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa inaysan Suuragal ahayn in Ilaah sameeyo qofku inuu rumeysto markuu dhinto. Laakiin sug - Ciise waa kan kiciya kuwa dhintay. Oo isagu waa isaga dhibbanaha dib u heshiisiinta, ma aha dembiyadayada oo keliya laakiin kuwa adduunka oo dhan (1 Yooxanaa 2,2).
Laakiin masaalkii Laasaros, qaar baa ku doodi kara. "Miyaanu Ibraahim odhan lahayn farqi weyn ayaa u dhexeeya, oo aan la qiyaasi karin oo u dhexeeya dhinaciisa iyo dhinaca taajirnimada ninkaas?" (Eeg Luukos 16,19: 31).
Ciise ma uusan dooneynin in masaalkan loo fahmo inuu yahay sawir qaade ah nolosha geerida ka dib. Immisa Masiixiyiin ah ayaa jannada ku tilmaami doona "laabtii Ibraahim" oo ah meel aan Ciise lagu arki karin? Masaalku waa farriin u ah heerka mudnaanta leh ee diinta Yuhuudda qarnigii hore, maahan muuqaal nololeed ka dib sarakicidda. Inta aynaannaan akhriyin wax ka badan Ciise wuxuu geliyay, aynu isbarbar dhigno wuxuu Bawlos ku qoray Rooma 11,32.
Ninkii hodanka ahaa ee masaalkan weli wuu toobad keenin. Wuxuu weli isu arkaa inuu yahay qof darajo ka sarreeya Laasaros. Wuxuu wali ku arkaa Laasaros keliya inuu jiro qof u adeegaya. Waxaa laga yaabaa inay macquul tahay inaad u maleyso inuu ahaa gaalnimadii joogtada ahayd ee ninka taajiriinta ah taasoo ka dhigtay farqiga mid aan xad gudub lahayn, oo aan ahayn daruuri aan loo baahnayn oo loo yaqaan 'cosmic'. Aynu xasuusnaano: Ciise qudhiisa, iyo isaga oo keliya, ayaa xiraya farqiga kale ee aan laga adkaan karin ee ka imanaya xaaladdeenna dembiga leh ee aan la heshiinno Ilaah. Ciise ayaa ku nuuxnuuxsaday mawduucan, bayaankan masaalinta - in badbaadadu ay ku timaaddaa oo keliya rumaysadka uu isaga ku haysto - markuu yidhi: "Haddaad maqashid Muuse iyo nebiyada, llaah kama noqon doontid haddii qof ka soo kaco kuwii dhintay" (Luukos 16,31).
Ujeedada Eebbe ayaa ah inuu dadka u keeno badbaadada, oo aanu u silcin. Ciise waa dib u heshiisiin, oo rumaysta ama ha aaminin, wuxuu qabtaa shaqo aad u fiican. Isagu waa badbaadiyaha dunida (Yooxanaa 3,17), ma ahan Badbaadiyaha jajabkii dunida. «Maxaa yeelay Ilaah dunidu wuu jeclaa» (Aayadda 16) - kumana koobna hal qof kun. Ilaah jidad buu leeyahay, Waddooyinkiisuna way ka sarreeyaan jidadkeenna.
Wacdigii Buurta dusheeda, Ciise wuxuu ku yidhi: "Waa inaad jeclaataan cadaawayaashaada" (Matayos 5,43). Qofku wuxuu si nabdoon u qaadan karaa inuu jeclaa cadaawayaashiisa. Mise qof ayaa rumeysan inuu Ciise neceb yahay cadaawayaashiisa, laakiin wuxuu ina farayaa inaan jeclaano cadaawayaasheena, iyo in nacaybkiisa uu bixiyo sharaxaada in cadaabta jirto? Taasi waxay noqon doontaa mid aad u kacsan. Ciise wuxuu noogu yeedhay inaan jeclaano cadaawayaasheenna maxaa yeelay isagaa sidoo kale iyaga. Aabbow, cafi; maxaa yeelay iyagu garan maayaan waxay samaynayaan! » wuxuu ahaa shafeeco kuwa iskutallaabta lagu qodbay (Luukos 23,34).
Xaqiiqdii: Kuwa diida nimcada Ciise xitaa markay ogaadeen kadib waxay aakhirka ka guran doonaan midhihii doqonnimadooda. Dadka diida inay u yimaadaan cuntada Wananka, ma jiro meel aan ka ahayn mugdi aad u xun (mid ka mid ah muujinta sawirada oo uu Ciise ku sharraxay xaaladda ka fogaanta xagga Ilaah, fogaanta Ilaah ka jirta; eeg Matayos 22,13:25,30;).
Waraaqda ay u qortay reer Rooma (11,32) Bawlos hadalkan layaabka leh wuxuu ku yidhi: "Waayo, Ilaah wuxuu nin kasta ku daro caasinimo inuu u wada naxariisto kulli." Xaqiiqdii, ereyga asalka ah ee Giriiggu wuxuu qof kasta u tilmaamaa, ma aha qaar, laakiin dhammaantood. Dhammaan waa dembilayaal dhammaantoodna waa lagu muujiyey Masiixa - ha ahaadeen ama hadday jecleysteen; inay aqbalaan iyo inay kale; inay ogaadaan geerida ka hor iyo in kale.
Muxuu qof ka odhan karaa muujintaan ka badan waxa Bawlos ku sheegay aayadda soo socota: “Oh hoog hodantinimada taajirnimada, xigmadda iyo aqoonta Ilaah! Cunnadiisa iyo jidadkiisuna waa kuwa aan la fahmi karin! Sababtoo ah 'yaa aqoonsaday macnaha Rabbiga ama yuu ahaa lataliyihiisu?' Amase yaa isaga wax siiyay oo hortayda in Ilaah abaalmarin doono? Maxaa yeelay isaga iyo xaggiisa iyo wax waluba isagay ka yimaadeen isaga. Ammaanta isagaa leh weligiis. Aamiin » (Aayadaha 33-36).
Haa, jidadkiisu waxay umuuqdaan kuwo aan la fahmi karin oo inbadan oo ah Masiixiyiinteena si fudud uma aaminsani karno in injiilku sidaas u fiicnaan karo. Qaarkeenna waxay moodeen inay og yihiin fikirka Ilaahay sifiican oo aan ognahay in qof kasta oo aan Masiixi ahayn dhimashadu uu toos u galayo cadaabta. Bawlos, dhinaca kale, wuxuu doonayaa inuu caddeeyo in heerka aan la koobi karin ee nimcada rabbaaniga ahi ay tahay mid si fudud aan loo fahmi karin - qarsoodi ah oo lagu muujiyay Masiixa oo keliya: Masiixa dhexdeeda Ilaah wuxuu sameeyay wax ka sarreeya garaadka aadanaha ee aqoonta jannada.
Waraaq uu u diray Masiixiyiinta Efesos, Bawlos wuxuu noo sheegayaa in Ilaah sidan ugala yimid bilowgii (Efesos 1,9: 10). Waxay ahayd sababta salka ku ahayd wicitaankii Ibraahim, doorashada reer binu Israa'iil iyo Daa'uud, go'aannadii federaalka (3,5-6). Ilaahay sidoo kale wuxuu badbaadiyaa "shisheeyaha" iyo kuwa aan Israa'ilyiinta ahayn (2,12). Xitaa kuwa sharka leh wuu badbaadiyaa (Rooma 5,6). Wuxuu macno ahaan u jiitaa qof walba naftiisa (Yooxanaa 12,32). Taariikhda adduunka oo dhan, wiilka Ilaah wuxuu ku shaqeeyaa “gadaasha” wuxuuna qabtaa shaqadiisa furashada ee wax walba lala yeesho Ilaah. (Kolosay 1,15: 20). Nimcada Ilaah waxay leedahay caqli u gaar ah, caqli ahaan badanaa u muuqda kuwa aan caqli gal ahayn dadka diinta.
Dariiqa kaliya ee badbaadada
Marka la soo koobo: Ciise waa jidka keliya ee badbaadada, oo isagu gabi ahaanba ayuu u jiheeyaa qof walba naftiisa - qaabkiisa, waqtigiisa. Way fiicnaan laheyd in la caddeeyo xaqiiqda ah in caqliga aadanaha aan la fahmi karin: ma jiro meel kale oo adduunka ka jirta oo aan ahayn Masiixa, maxaa yeelay, sida Bawlos leeyahay, ma jiraan wax isaga aan isaga uumay oo aan isaga ku dhex jirin. (Kolosay 1,15: 17). Dadka ugu dambeyntii diida isaga ayaa yeelaya inkasta oo jacaylkiisa; Ciise ma diido iyaga (Isagu ma jecla inuu jeclaado, wuu u dhintay iyaga, wuuna u dhaafay), laakiin way diideen isaga.
C. S. Lewis hat es so ausgedrückt: «Am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen: jene, die zu Gott sagen ‚Dein Wille geschehe’, und jene, zu denen Gott am Ende sagt ‚DEIN Wille geschehe’. Wer in der Hölle ist, hat sich dieses Schicksal selbst gewählt. Ohne diese Eigenentscheidung könnte es keine Hölle geben. Keine Seele, die ernsthaft und dauerhaft nach Freude strebt, wird sie verfehlen. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan» (Furiinka weyn, Cutubka 9aad). (1)
Markii aan maqlay Masiixiyiintu oo ku wacdiyaya macnaha Sebtember 11, waxaan xasuustaa halyeeyayaal dab-damis ah iyo saraakiil booliis ah oo naftooda u huray isku day lagu badbaadinayo dadka Xarunta Ganacsiga Dunida ee gubatay. Sidee kani wax isugu imaanayaa: in Masiixiyiintu ay ugu yeeraan badbaadiyayaashan geesiyaasha oo ay sacab u huraan allabarikooda, laakiin dhanka kale waxay cadeeyaan haddii aysan qiran Masiixa dhimashadooda ka hor, hadda lagu silcin doono cadaabta?
Injiilku wuxuu sharxayaa inay rajo ka qabaan dhammaan kuwa naftooda ku waayey Xarunta Ganacsiga Dunida iyagoon horay u qiran Masiixa. Waa Sayidkii soo sarakiciyay inay la kulmi doonaan geerida ka dib, isaguna waa garsooraha - isaga oo leh godadka ciddiyaha gacmihiisa - diyaarna u ah inay xirtaan oo ay xiisaan dhammaan xayawaankiisa u yimid isaga. Wuu cafiyey ka hor intaysan dhalan (Efesos 1,4; Rooma 5,6 iyo 10). Qaybtani waa la sameeyay, sidoo kale annaga ayaa ah kuwa hadda rumeysan. Waxa kaliya ee uga hadhay kuwa u yimid Ciise hortiisa inay taajistaan ​​taajkooda hortiisa carshiga oo ay aqbalaan hadiyaddiisa. Qaar baa laga yaabaa inaysan. Laga yaabee inay ku xidhn yihiin is-jacaylka iyo nacaybka kuwa kale oo ay u arki doonaan Sayidkii soo sara kacay inuu yahay cadowgooda. Waa wax ka badan xishood, waa masiibo ku dhacday maxaa yeelay isagu ma ahan cadowgeeda. Sababtoo ah wuu jecel yahay iyada, si kastaba. Sababtoo ah isagu wuxuu doonayaa inuu gacmihiisa ku soo urursado sida digaag iyada dhasha haddii ay isaga daayaan.
Si kastaba ha noqotee, haddii aan aaminsanahay Rooma 14,11 iyo Filibiin 2,10, waxaan u qaadan karnaa in dadka ugu badan ee ku dhintay weerarka argaggixiso inay si farxad leh ugu degdegaan gacmaha Ciise sida carruurta oo kale gacmaha waalidkood.
"Ciise waa badbaadiyey", Masiixiyiintu waxay wax ku qoraan boodhadhkooda iyo dhejisyadooda. Taasi waa sax. Isaga ayaa samaynaya. Oo isagu waa bilawga iyo dhammaystirka badbaadada, isagu waa asalka iyo yoolka wax kasta oo la abuuray, dhammaan uun kasta, oo ay ku jiraan kuwa dhintay. Ilaah wiilkiisii ​​uma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, Ciise ayaa yidhi. Wuxuu u diray inuu dunida badbaadiyo (Yooxanaa 3,16-17).
Iyadoo aan loo eegin waxay dadka qaar yiraahdaan: Ilaah wuxuu doonayaa inuu badbaadiyo dadka oo dhan marka laga reebo (1 Timoteyos 2,4: 2; 3,9 Butros), ma ahan wax yar. Iyo waxa aad weli u baahan tahay inaad ogaato - isagu weligii kama tanaasuli doono. Waligiis ma joojiyo jaceylka. Waligiis ma joogsan doono wixii uu ahaan jiray, wuxuu ahaadaa had iyo jeerna wuxuu u noqon doonaa dadka - hal-abuurashooda iyo dib u heshiisiintooda. Cidina kuma dhacdo mesh. Qofna loogama dhigin cadaabta. Haddii qof cadaabta galo - yar, micno lahayn, mugdi ah meelna aan ka jirin nolosha weligeed ah - waa sababta oo ah waxay diidaan inay aqbalaan nimcada Ilaah uu iyaga u hayo. Mana aha sababta oo ah Ilaah wuu neceb yahay isaga (isagu ma uusan). Sababta oo ah Ilaahay ma aarsado (maahan). Sababtuna waxay tahay isaga 1) wuxuu neceb yahay boqortooyada Ilaah wuxuuna diidayaa nimcadiisa, iyo 2) maxaa yeelay Ilaah ma doonayo inuu kharribo kuwa kale.
Injiilku waa dhambaal rajo u ah qof walba. Wacdiyeyaasha Masiixiyiinta maaha inay ku shaqeeyaan hanjabaadaha cadaabta inay dadka ku khasbaan inay u rogaan Masiix. Waxaad si fudud u sheegi kartaa runta, warka wanaagsan: «Ilaah wuu ku jecel yahay. Isagu kuma xanaaqo. Ciise wuxuu u dhintay adiga sababta oo ah waxaad tahay dambiile, oo Ilaah aad ayuu kuu jecel yahay in uu kaa badbaadiyey wax kasta oo ku baabbi'iya. Marka maxaad u dooneysaa inaad ku sii noolaato nolosha sidii wax kale oo aan ahayn mooyee qatarta, naxariis darrada, saadaalin la'aanta iyo naxariis darada aad haysato? Maxaad u imaan weyday oo aad u bilaabi weyday inaad la kulanto jacaylka Ilaah oo aadan u dhadhaminin barakooyinka boqortooyadiisa? Adiguba isaga ayaa iska leh. Isagu mar hore wuxuu bixiyaa dembigaaga. Wuxuu murugadaada farxad ugu beddeli doonaa farxad. Wuxuu ku siin doonaa nabadgalyo gudaha ah oo aadan hore u aqoon. Waxay noloshaada u horseedi doontaa macno iyo hanuunin. Waxay kaa caawin doontaa inaad hagaajiso xiriirkaaga. Isagaa nasin doona. Aamin isaga. Isaga ayaa ku sugaya. »
Fariinta ayaa aad ufiican oo si macno leh ayeey uga soo baxeysaa Rooma 5,10: 11, Bawlos wuxuu qoray: “Maxaa yeelay, haddii Ilaah la heshiisiiyey dhimashadii wiilkiisa markii aannu weli cadowgan ahayn, intee in ka sii badan ayaa innaguna badbaadin doonnaa markii aan heshiis la galno dabadeed. Taas oo keliyana ma aha, laakiin waxaynu ku faraxnaa Ilaah xagga Rabbigeenna Ciise Masiix, kan aynu haatan heshiiska ku helnay.
Rajada ugu dambeysa! Ugu dambeyn nimcada! Dhimashadii Masiixa, Ilaah wuxuu ku heshiisiiyaa cadaawayaashiisa, oo nolosha Masiixa wuu ku badbaadiyaa. La yaab ma laha inaan ku faanno Ilaah xagga Rabbigeenna Ciise Masiix - annaguna isaga waxaynu qayb ka nahay wixii aan dadka u sheegno. Uma baahna inay ku sii noolaadaan sidii iyagoo aan lahayn meel miiska Ilaah; hore ayuu ula heshiisiiyay, guriga ayey aadi karaan, guriga ayey ku laaban karaan.
Masiixu wuxuu badbaadiyaa dembilayaasha. Runtii waa war wanaagsan. Ninka ugufiican ee ninkaas waligiis la maqli karo.